လုပ်ငန်းခွင် အထောက်အကူပြု သင်တန်းများ | Y-Max Technologies Co.,Ltd
ဘယ်သူတွေ တက်ရောက် နိုင်သလဲ?
Computer Networking ပိုင်းကို စိတ်ပါဝင်စားသူများ၊ ကွန်ပျူတာ တက္ကသိုလ်(CU)၊ နည်းပညာ တက္ကလိုလ်(TU)မှ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ၊ Hardware/Networking ပိုင်းနဲ့ အလုပ်လုပ်နေသူများ၊ နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြု UK မှပေးအပ်သော Networking Diploma ရယူလိုသူများ၊ မိမိ Career ကိုမြှင့်တင်လိုပြီး လစာပိုမို ကောင်းမွန်လိုသူများ တက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ အဓိကကတော့ UK က Professional Diploma တွေကို ပြည်တွင်းမှာပဲ ဈေးနှုန်း ချိုသာစွာနဲ့ UK Standard အတိုင်း သင်ကြားပေးပြီး UK ကဘွဲ့ကို အချိန်တိုအတွင်း ရယူလိုတဲ့ သူတွေ တက်ရောက်သင့်ပါတယ်။
သင်ကြား ပေးမယ့် အကြောင်းအရာများ
ပြည်တွင်း/ပြည်ပ ICT နယ်ပယ်တွင် Demand အများဆုံးနှင့် လစာ အကောင်းဆုံးဖြစ်ခြင်း၊ မည်သည့် နေရာဒေသတွင်မဆို အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ပေါများခြင်း နှင့် အဆင့်မြင့် Networking ပညာရပ်များ ဆက်လက် လေ့လာရာတွင် အထောက်အကူ ဖြစ်ခြင်းတို့ ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်လို လူမျိုးတွေ တက်ရောက် သင့်တာလဲ?
Computer Networking ပိုင်းကို စိတ်ပါဝင်စား တဲ့သူတွေ ၊ ယခုလက်ရှိမှာ Hardware၊ Networking ပိုင်းနဲ့ အလုပ်လုပ်နေပြီးတော့ လက်ရှိမိမိ ဘ၀ကိုမြှင့်တင်ပြီး လစာပိုမို ကောင်းမွန်လို သူတွေ၊ ကွန်ပျူတာ တက္ကသိုလ် ကျောင်းသား/သူ တွေ နဲ့ နည်းပညာ တက္ကသိုလ်မှ EC/IT Major ကျောင်းသား/သူ တွေ တက်ရောက်သင့်ပါတယ်။
CCNA အောင်ပြီးရင် လစာ ဘယ်လောက်ရမှာလဲ?
ပြည်တွင်းမှာ ဆိုရင်တော့ CCNA အောင်တဲ့သူတွေ အနည်းဆုံး ဒေါ်လာ ၃၀၀ မှ ၅၀၀ အတွင်း ရရှိနိုင်ပါတယ်။ မြန်မာငွေနဲ့ ဆိုရင်တော့ ၃သိန်းခွဲကနေ ၆သိန်း ကြားဖြစ်ပါတယ်။ Experience နဲ့ တစ်ခြား Soft skills တွေပေါ်မူတည်ပြီး တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် မတူညီနိုင်ပါဘူး။ စင်္ကာပူမှာတော့ CCNA တစ်ယောက်ရဲ့ အနည်းဆုံး လစာက SGD 2200 ဖြစ်ပြီး မြန်မာငွေနဲ့ ဆိုရင် ၂၂ သိန်း နီးပါးရှိပါတယ်။
MCSA/MCSE Exam ဖြေဆို လိုသူများ နှင့် Professional System Engineer တစ်ယောက်အနေဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကြာင်း ပြုလိုသူများ တက်ရောက်သင့်ပါတယ်။ Computer Networking/Server ပိုင်းကို စိတ်ပါဝင်စားတဲ့ သူတွေ၊ ယခုလက်ရှိမှာ Networking/Server ပိုင်းနဲ့ အလုပ်လုပ် နေပြီးတော့ လက်ရှိ မိမိဘ၀ကို မြှင့်တင်ပြီး လစာပိုမို ကောင်းမွန် လိုသူတွေ၊ ကွန်ပျူတာ တက္ကသိုလ် ကျောင်းသား/သူ တွေ နဲ့ နည်းပညာ တက္ကသိုလ်မှ EC/IT Major ကျောင်းသား/သူ တွေ တက်ရောက်သင့်ပါတယ်။
ဘာကြောင့် ဒီ Course ကို တက်ရောက် သင့်တာလဲ?
ပြည်တွင်း/ပြည်ပ ICT နယ်ပယ်တွင် System Engineer များအနေဖြင့် လစာကောင်းမွန်လာခြင်း၊ မည်သည့်နေရာ ဒေသတွင်မဆို အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းပေါများခြင်း နှင့် အဆင့်မြင့် System Engineering ဆိုင်ရာ ပညာရပ်များ ဆက်လက် လေ့လာရာတွင် အထောက်အကူဖြစ်ခြင်းတို့ေ ကြာင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ICT Field ထဲရှိ Enterprise လုပ်ငန်းများဖြစ်သော Bank များ ၊ Airline များ ၊ ISP, Telecom များတွင် MCSA/MCSE Certified များစွာ လိုအပ်လျက် ရှိနေခြင်း ကြောင့်လည်း ဒီ Course ကို တက်ရောက်သင့်တဲ့ အချက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
pfSense ဆိုတာ Open Source Firewall ဖြစ်ပြီး Physical Computer ပေါ်တွင် Installation ပြုလုပ်၍ သီးသန့် Firewall သို့မဟုတ် Router အဖြစ် အသုံးချနိုင်ပါသည်။ Pfsense ကို Hardware အနေနဲ့လည်း ထုတ်တာတွေ ရှိပါတယ်။ pfSense ကို Enterprise Network တွေနဲ့ Hotel, Shopping Center, Bank, Airport အစရှိတဲ့ Network တွေမှာ တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုနေကြပြီး Wireless Network တွေမှာဆိုရင် User Account များဖြင့် ထိန်းချုပ်ခြင်း ၊ Internet Line များပေါင်းခြင်း၊ User များကို အချိန်များ ကန့်သတ်နိုင်ခြင်း အစရှိသည်တို့ကို ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ လက်တွေ့ လုပ်ငန်းခွင်မှာ ကျယ်ပြန့်စွာ အသုံးပြုလျက် ရှိပါတယ်။
pfSense Workshop ကို ဘယ်သူတွေ တက်ရောက်သင့်တာလဲ?
Computer Networking ပိုင်းကို စိတ်ပါဝင်စား တဲ့သူတွေ၊ ယခုလက်ရှိမှာ Hardware၊ Networking ပိုင်းနဲ့အလုပ် လုပ်နေပြီးတော့ လက်ရှိ မိမိဘ၀ကို မြှင့်တင်ပြီး လစာပိုမိုကောင်းမွန် လိုသူတွေ၊ ကွန်ပျူတာ တက္ကသိုလ် ကျောင်းသား/သူ တွေ နဲ့ နည်းပညာ တက္ကသိုလ်မှ EC/IT Major ကျောင်းသား/သူ တွေ တက်ရောက် သင့်ပါတယ်။
ပြည်တွင်း/ပြည်ပ ICT Field ထဲတွင် Web Designer တစ်ဦးအဖြစ် အသက်မွေးဝမ်း ကြောင်းပြုလိုသူများ၊ Web Design ပိုင်းကို စိတ်ဝင်စားသူ များနှင့် စတင် လေ့လာလိုသူများ၊ ကွန်ပျူတာ တက္ကသိုလ် ကျောင်းသား/သူ များ၊ နည်းပညာ တက္ကသိုလ်မှ EC/IT Major ကျောင်းသား/သူ တွေ နဲ့ အခြားသော မည်သည့် တက္ကသိုလ်မှ ကျောင်းဆင်းမဆိုတက် ရောက်သင့်ပါတယ်။ Web Design ပိုင်းကို အနည်းငယ် သင်ကြားဖူးသော်လည်း လက်တွေ့ မရေးဆွဲ နိုင်သေးသူများလည်း တက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။
ဘယ်လို Course တွေကို သင်ကြားပေးမှာလဲ?
သင်တန်း ပြီးဆုံးပါက Hands on Experience ရရှိစေရန်အတွက် Static Web Application Project ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပြီး ICT နယ်ပယ်တွင် Web Designer တစ်ဦးအဖြစ် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါ တယ်။
ကျယ်ဝန်း သပ်ရပ်သော Air Con ခန်းများတွင် ကျောင်းသား တစ်ဦးလျှင် PC တစ်လုံးချင်းစီဖြင့် လက်တွေ့ ပိုင်းများကိုသာ ဦးစားပေးပြီးသင်ကြားသွား မှာဖြစ်ပါတယ်။
Course Outline တွေကတော့
သင်တန်း ပြီးဆုံးချိန်တွင် လက်တွေ့ Project ပြုလုပ်ရမည် ဖြစ်သောကြောင့် Real Industry တွင် လက်တွေ့ အသုံးချနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး မိမိကိုယ်တိုင် Web Design များကို ရေးသားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
6.	CEH (Cybersecurity Ethical Hacking)
ယနေ့ခေတ် ပြည်တွင်းသာမက ပြည်ပနိုင်ငံများတွင် လိုအပ်ချက် Demand မြင့်မားနေသော သတင်း အချက်အလက် လုံခြုံရေး Professional များအဖြစ် လုပ်ငန်းခွင် ဝင်ရောက်လိုသူများ၊ Cyber Security/ Information Security ပိုင်းစိတ်ပါ ဝင်စားသူများ အတွက် နိုင်ငံတကာတွင် သင်တန်းကြး၊ စာမေးပွဲကြေး မြင့်မားသော ဘာသာရပ်များ ကို ပြည်တွင်းတွင် တူညီသော သင်ကြားမှု စနစ်၊ Courseware များအတိုင်း အသက်သာဆုံး လေ့လာ သင်ယူ ကျွမ်းကျင်နိုင်စေရန် စီစဉ်ဖွင့်လှစ်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
Network/System Security ပိုင်းစိတ်ပါဝင်စား သူများ ၊ Cyber Security, Information Security ပိုင်းနှင့် Ethical Hacking ပိုင်းကို အထူး စိတ်ဝင်စားပြီး Security Professional အဖြစ် အသက်မွေး ၀မ်းကြောင်း ပြုလိုသူများ တက်ရောက် သင့်ပါတယ်။ Networking အခြေခံရှိထားသူများ နှင့် CCNA, MCSA/MCSE လေ့လာထားသူများ လည်းတက်ရောက် နိုင်ပါတယ်။
Offensive/ Defensive Security များ၊ Hacking Procedure များနှင့် လုပ်ငန်းခွင် ဝင်ရောက်နိုင်စေမည့် Security Admin များအတွက် လိုအပ်သော Skill များ ခြုံငုံမိအောင် Theory+Practical မျှတစွာဖြင့် သင်ကြား ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
Hacking and Cyber Security Course Outline
Practical A+ Course တက်ပြီး သွားရင်တော့ သင်ကိုယ်တိုင် Computer တစ်လုံးကို အစအဆုံး ကျွမ်းကျင်စွာ ပြုပြင် တပ်ဆင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Computer System Unit အတွင်းမှာရှိတဲ့ အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုခြင်းစီကို အသေးစိတ် သင်ကြား ရမည်ဖြစ်ပြီး Computer များကို မိမိကိုယ်တိုင် ပြုပြင် တပ်ဆင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်သူတွေ တက်ရောက် သင့်ပါသလဲ?
ကွန်ပျူတာ တစ်လုံးကို ကိုယ်တိုင် အစအဆုံးပြုပြင် တပ်ဆင်လိုသူများ၊ Computer/IT ပိုင်းကို စိတ်ပါဝင်စားသူများ၊ Computer အခြေခံပိုင်းကို တက်ရောက် ထားသူတွေ၊ Hardware Engineer အဖြစ် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပြုချင်သူများ၊ Networking ပိုင်းနဲ့အလုပ် လုပ်ကိုင်လိုသူများ၊ လက်ရှိမိမိ ဘ၀ကို မြှင့်တင်ပြီး လစာပိုမို ကောင်းမွန်လိုသူတွေ၊ ကွန်ပျူတာ တက္ကသိုလ် ကျောင်းသား/သူ တွေ နဲ့ နည်းပညာ တက္ကသိုလ်မှ EC/IT Major ကျောင်းသား/သူ တွေ တက်ရောက်သင့်ပါတယ်။
Installation & Upgrading Windows Operation Systems (Windows 7, Windows 8, Windows 10)
8. Advance A+
အဆင့်မြင့် ကွန်ပျူတာ System ပိုင်းဆိုင်ရ ပြုပြင်ခြင်း သင်တန်းဖြစ်ပြီး Practical A+ (Hardware) ပိုင်းကို တက်ရောက် ထားပြီးသူများနှင့် စိတ်ပါဝင်စား၍ လေ့လာ လိုသူများလည်း တက်ရောက် နိုင်ပါသည်။ အတန်းတစ်တန်းကို လူဦးရေ (၂၀)သာ လက်ခံမှာဖြစ်လို့ အမြန်ဆုံး လာရောက်အပ်နှံမှ နေရာအတွက် စိတ်ချရမှာ ဖြစ်ပါတယ်ရှင့်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အမှန်တကယ် ကျွမ်းကျင် တတ်မြောက်စေရန် သင်ကြား ပေးမှာဖြစ်ပြီး စိတ်ကျေနပ်မှု မရှိပါက နောက်တစ်တန်းမှာ (အခမဲ့) ပြန်လည် တက်ရောက် နိုင်သလို ပေးရတာနဲ့ ပြန်ရတာ မထိုက်တန်ဘူးလို့ ထင်ရင်လည်း သင်တန်းကြေး ပြန်လည် ထုတ်ယူ နိုင်ပါတယ်။ Advanced A+ Course မှာ Operating Systems များကို USB Flash Drive ဖြင့် Windows တင်နည်းများ၊ Dual Boot System Windows တင်နည်းများ၊ Windows Login Password Recovery ပြုလုပ်နည်းများ ကို အခြေခံမှစ၍ အဆင့်မြင့်အထိ သင်ကြားရမည်ဖြစ်ပြီး Group Policy ကိုအသုံးပြုကာ Computer System များကို လိုအပ်သလို ပြုပြင် ထိန်းချုပ်ခြင်းများ၊ Registery Editor ကိုအသုံးပြု၍ System တစ်ခုလုံးကို ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းခြင်းများ၊ Technician တစ်ဦးအနေဖြင့် မသိမဖြစ်သိရမည့် Windows Command Line အသုံးပြုပုံ အသေးစိတ်များ၊ Command Line ကိုအသုံးပြု၍ Virus ရှာဖွေ ရှင်းလင်းပုံများ၊ မိမိကိုယ်တိုင် Virus Program ရေးသားပုံ၊ Malware များ၏ အန္တရာယ်မှ ကြိုတင် ကာကွယ် တားဆီးနိုင်ရန် Antivirus အသုံးပြုပုံ နှင့် Online Update ပြုလုပ်ပုံ၊ Computer System လျှင်မြင်စွာ အသုံးပြုနိုင်စေရန် Maintenance ပြုလုပ်ပုံ အဆင့်ဆင့်များ အပါအ၀င် Batch File Programming အခြေခံ ရေးသား အသုံးပြုပုံများ၊ Hard Disk Clone ပြုလုပ်ပုံ များကို အသေးစိတ် သင်ကြားရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် Backup System၊ Recovery System များ၊ ပျောက်ရှသွားသော အရေးကြီး Data များ နှင့် Windows Login Password များကို ပြန်လည် ရယူနည်းများ၊ Third Party Software မျိုးစုံ အသုံးပြုခြင်းများ၊ အသုံးများသော Run Command များ၊ Windows Shortcuts များ၊ System Tools၊ Windows Secrets များ၊ Windows Tips and Tricks များကို Windows 10 ကိုအခြေခံ၍ အသေးစိတ် သင်ကြားပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်လို လူမျိုးတွေ တက်ရောက်သင့်တာလဲ?
Computer/IT ပိုင်းကို စိတ်ပါဝင်စားသူများ၊ Computer အခြေခံပိုင်းကို တက်ရောက် ထားသူတွေ၊ Practical A+ သင်တန်းတက် ရောက်ပြီးသူများ၊ Hardware Engineer အဖြစ် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပြုချင်သူများ၊ Networking ပိုင်းနဲ့အလုပ် လုပ်နေပြီးတော့ လက်ရှိမိမိ ဘ၀ကိုမြှင့်တင်ပြီး လစာပိုမို ကောင်းမွန်လိုသူတွေ၊ ကွန်ပျူတာ တက္ကသိုလ် ကျောင်းသား/သူ တွေ နဲ့ နည်းပညာ တက္ကသိုလ်မှ EC/IT Major ကျောင်းသား/သူ တွေ တက်ရောက် သင့်ပါတယ်။
9.	Network Engineering ( Essentials )
Local Area Network တစ်ခုတွင် File Folder များအား စနစ်တကျ Sharing ပြုလုပ်ခြင်း၊ Map Network Drive များ ဖန်တီးခြင်း၊ Security Level များ သတ်မှတ်ခြင်း အပါအ၀င် Network Engineer တစ်ဦးအနေဖြင့် အသိမဖြစ် သိရှိရမည့် IPv6, UTP/STP Cabling, Wireless Network Standards, Wireless Router Configurations and Troubleshooting များကို Real Internet Connection, Router များဖြင့် လက်တွေ့ပိုင်း ဦးစားပေး၍ စနစ်တကျ ရေးဆွဲထားသော သင်ရိုးများ ဖြင့် သင်ကြားပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Bonus Lesson အနေဖြင့် Virtual Box ထဲတွင် Network ချိတ်ဆက်နည်းများ ၊ Sharing ပြုလုပ်ခြင်းများ အစရှိသည်များကိုလည်း သင်ကြား ပေးမည်ဖြစ်ပြီး အခြားလိုအပ်သော Software, ISO, Video Learning များကိုလည်း (အခမဲ့) ပေးအပ် သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ သင်ကြားရမယ့် Course အသေးစိတ်ကိုတော့ အောက်မှာ ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။
ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပရှိ ICT နယ်ပယ်တွင် လစာ ကောင်းမွန်သော Network Engineer တစ်ဦးအဖြစ် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပြုလိုသူများ၊ နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြု Microsoft (USA) မှ စစ်ဆေးသော MCSA, MCSE,CCNA စာမေးပွဲ ဖြေဆိုလိုသူများ တက်ရောက်နိုင်ပါသည်။ ဒီသင်တန်းမှာ Networking ပိုင်းကို အခြေခံကနေ စတင် သင်ကြားပေးမှာ ဖြစ်လို့ Networking ပိုင်းကို ယခုမှ စတင်လေ့လာမည့် သူများလည်း တက်ရောက် နိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါ သင်တန်းတွင် Networking ကို အခြေခံမှစ၍ အဆင့်မြင့်အထိ သင်ကြားရမည် ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြု CompTIA Network+(USA) ၏ သင်ရိုးညွှန်းတန်း များအပြင် Server 2012 ကိုလည်း သင်ကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ TCP/IPv4, IPV6, Subnetting, OSI Models, Network Media and Connectors, Active Directorys, DHCP Server, DNS Server,NAT,FTP, IIS, ICS,Remote Desktop, Web Server, VPN Server,Lan Routing (Gateway Server) အစရှိသော ဘာသာရပ် များအပြင် Wireless Network ပိုင်းများဖြစ်သော Wireless Network Standards, Security, Outdoor Antenna Concepts, Wireless Router Configurations and Troubleshooting များကို တကယ့် Internet Connection ကို အသုံးပြုပြီး လက်တွေ့ပိုင်း ဦးစားပေး၍ သင်ကြားပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘွဲ့မရသေးသော်လည်း Computer Networking ပိုင်းကို စိတ်ပါဝင်စားတဲ့သူတွေ၊ ယခုလက်ရှိမှာ Hardware၊ Networking ပိုင်းနဲ့ အလုပ်လုပ် နေပြီးတော့ လက်ရှိမိမိ ဘ၀ကိုမြှင့်တင်ပြီး လစာပိုမို ကောင်းမွန်လိုသူတွေနဲ့ ကွန်ပျူတာ တက္ကသိုလ် ကျောင်းသား/သူ တွေ နဲ့ နည်းပညာ တက္ကသိုလ်မှ EC/IT Major ကျောင်းသား/သူ တွေ နဲ့ အခြားသော မည်သည့် တက္ကသိုလ်မှ ကျောင်းဆင်း မဆို တက်ရောက်သင့်ပါတယ်။
ပုံမှန် ရုံးချိန်လွတ် အတန်းများလည်း ဖွင့်လှစ်ထားသလို ၃လ Section အတန်းတက်ဖို့ အချိန်မပေးနိုင်သောသူများ၊ အချိန်တိုတွင်း ထိရောက်စွာဖြင့် သင်ကြားလိုသူများ အတွက် ရည်ရွယ်၍ (၅)ရက် (၄၅)နာရီ အပြတ် အတန်းများကိုလည်း ဖွင့်လှစ်ပေးထားပါတယ်။
သင်တန်းပြီးဆုံးပါက ဘဏ်များ၊ လေကြောင်းလိုင်းများ၊ ISP၊ Telecom အစရှိသော IT Department များတွင် System Administrator/Engineer တစ်ဦးအဖြစ် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပြုနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
အမှန်တကယ် ကျွမ်းကျင် တတ်မြောက်စေရန် သင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပြီး စိတ်ကျေနပ်မှုမရှိပါက နောက်တစ်တန်းမှာ (အခမဲ့) ပြန်လည် တက်ရောက် နိုင်သလို ပေးရတာနဲ့ ပြန်ရတာ မထိုက်တန်ဘူးလို့ ထင်ရင်လည်း သင်တန်းကြေး ပြန်လည် ထုတ်ယူ နိုင်ပါတယ်။
ယနေ့ ICT လောကတွင် အသုံးများ တွင်ကျယ်လာသည့် Open Source OS တစ်ခုဖြစ်သော Linux OS အသုံးပြုနည်းများကို အခြေခံမှစ၍ Linux OS အချင်းချင်း Network ချိတ်ဆက်နိုင်သည် အထိ သင်ကြားပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Linux နှင့်အတူ အခြားသော မတူညီတဲ့ OS အချင်းချင်း ချိတ်ဆက်၍ File Sharing ပြုလုပ်ပုံ များကိုလည်း လက်တွေ့ ပြသသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အသုံးပြု သင်ကြားပေးမယ့် OS ကတော့ CentOS ဖြစ်ပြီး အောက်ဖော်ပြပါ Course Outline တွေကို ထည့်သွင်း သင်ကြားပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Computer Networking ပိုင်းကို စိတ်ပါဝင်စားတဲ့သူတွေ ၊ ယခုလက်ရှိမှာ Hardware ၊ Networking ပိုင်းနဲ့အလုပ် လုပ်နေပြီးတော့ လက်ရှိမိမိ ဘ၀ကိုမြှင့်တင်ပြီး လစာပိုမိုကောင်းမွန် လိုသူတွေ ၊ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် ကျောင်းသား/သူ တွေ နဲ့ နည်းပညာတက္ကသိုလ်မှ EC/IT Major ကျောင်းသား/သူ တွေတက်ရောက်သင့်ပါတယ်။
12. Linux Server
Linux Server Based သင်တန်းမှာ Linux နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အခြေခံကနေ အဆင့်မြင့်အထိ သင်ကြားပေးမှာ ဖြစ်လို့ Linux အခြေခံမရှိတဲ့ သူတွေလည်း တက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ ရှိ ICT Company ကြီးများတွင် Linux Professional တစ်ဦးအဖြစ် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပြုလိုသူများ၊ Linux Server ပိုင်းကို အသေးစိတ် အထူးပြု လေ့လာလိုသူများ တက်ရောက် နိုင်ပါသည်။
အဆိုပါ Course တွင်သင်ကြားမည့် ဘာသာရပ်များမှာ Introduction to Linux OS, Essentials Command Line, Linux File System, Linux Shell and Shell Script, Linux OS ပေါ်တွင် Software တင်နည်းများကို အဆင့်ဆင့် သင်ကြားပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Linux OS တွင် Network ချိတ်ဆက်ပုံ၊ Linux OS နှင့် Microsoft OS တို့ Network ချိတ်ဆက်ပြီး Permission သတ်မှတ်ပုံ၊ File Sharing ပြုလုပ်ပုံ များကိုပါ သင်ကြားပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Telnet နဲ့ SSH ကိုသုံးပြီးတော့ Remote Login Access တွေပါသင်ကြားပေးသွား မှာဖြစ်ပါတယ်။
Linux Server ပိုင်းများဖြစ်သော DHCP Server, DNS Server, Web Server, Samba Server, Proxy Server(Squid), E-mail Server, Web Mail Server, NAT အပြင် Linux OS မှာ Built in ပါတဲ့ Iptables ဆိုတဲ့ Firewall ကိုအသုံးပြုပြီး Rules တွေကို အသေးစိတ်သတ်မှတ်ပြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၄င်းဘာသာရပ် များအားလုံးကို Real Internet Connection ကို အသုံးပြု၍ Real World အတိုင်း လက်တွေ့ကို ဦးစားပေး သင်ကြားမှာဖြစ်လို့ System/Network Engineer အဖြစ် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပြုမည့်သူများ လက်တွေ့ လုပ်ငန်းခွင်ကို တိုက်ရိုက် အခက်အခဲမရှိ ၀င်ရောက် လုပ်ကိုင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သင်တန်းပြီးဆုံးပါက Linux Professional တစ်ဦးအဖြစ် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပြုနိုင်မည့်အပြင် CompTIA Linux+(USA), RHCSA, RHCE Exam များဖြေဆိုနိုင်စေရန် များစွာ အထောက်အကူပြု မည်ဖြစ်ပါသည်။
ယနေ့ လုပ်ငန်းခွင်တိုင်းတွင် မရှိမဖြစ် အသုံးပြုလာကြတဲ့ CCTV Installation နှင့် Configuration များကို လက်တွေ့လုပ်ငန်း ခွင်ထဲမှာ ပြန်လည် အသုံးချ နိုင်သည်အထိ သင်ကြားပေးမည် ဖြစ်ပြီး CCTV Service ပြန်လည် ပြုလုပ် နိုင်စေရန် DVR/NVR, Power Supply/Camera/ 3G/4G Router အစရှိသော Real Device များကို လက်တွေ့ အသုံးပြု၍ လုပ်ငန်းခွင်အတိုင်း သင်ကြားပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင် မိမိရောက်နေရာ အရပ်မှ Mobile Phone ဖြင့် ရုံးတွင်းသို့ အချိန်မရွေး ကြည့်ရှုနိုင်သော Live View Cloud Service များကိုပါ လက်တွေ့ချိတ်ဆက် သင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
သင်တန်း ပြီးဆုံးရင် ဘာတွေရသွားမလဲ?
သင်တန်း ပြီးဆုံးပါက Freelance Installer အဖြစ် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပြုနိုင်စေရန် နှင့် Service ဆိုင်အဖြစ် ပြန်လည် ဖွင့်လှစ်နိုင်စေရန် လိုအပ်သည့် အကြံများ၊ CCTV နှင့် Network အပိုပစ္စည်းများကို လက်ကား ရရှိနိုင်သော နေရာများကို ချိတ်ဆက် ပေးခြင်းဖြင့် (အခမဲ့) ပြန်လည် ကူညီ ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်သူတွေ တက်ရောက် သင့်တာလဲ?
Computer Networking ပိုင်းကို စိတ်ပါဝင်စား တဲ့သူတွေ၊ ယခုလက်ရှိမှာ Hardware၊ Networking ပိုင်းနဲ့အလုပ် လုပ်နေပြီးတော့ လက်ရှိမိမိ ဘ၀ကိုမြှင့်တင်ပြီး လစာပိုမို ကောင်းမွန်လိုသူတွေ၊ ကွန်ပျူတာ တက္ကသိုလ် ကျောင်းသား/သူ တွေ နဲ့ နည်းပညာ တက္ကသိုလ်မှ EC/IT Major ကျောင်းသား/သူ တွေ တက်ရောက် သင့်ပါတယ်။
သင်ကြားပေးမယ့် Course Outline တွေကတော့
100% Lab Based ဖြစ်တာမို့လို့ သင်တန်းပြီးဆုံးပါက လုပ်ငန်းခွင်ကို တိုက်ရိုက် ၀င်ရောက်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်တွင်း/ပြည်ပ ICT နယ်ပယ်တွင် Networking ဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပြုလိုသူများ၊ Wireless Network ပိုင်းကို အဓိက ကျွမ်းကျင် တတ်မြောက် လိုသူများ နှင့် CWNA, CWNP အစရှိသော နိုင်ငံတကာ အသိအမှန်ပြု Wireless ကျွမ်းကျင်ပညာရှင် ဖြစ်လိုသူများ အတွက်ရည်ရွယ် ဖွင့်လှစ်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
သင်တန်းတွင် wireless ပိုင်းများကို အခြေခံမှစ၍ အဆင့်မြင့် အထိ သင်ကြားရမည်ဖြစ်ပြီး Outdoor Antenna ကြီးများဖြင့် Long Distance လွှင့်ခြင်းများ၊ CPE အသုံးပြုပုံ၊ IP camera များဖြင့် Wireless ကြည့်ရှုပုံများကို အသေးစိပ် သင်ကြားရမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် Wireless Radio Frequency, Wireless Standard, Wireless Infrastructure, WLANs, WMANs and WPANs, Wireless Network Services & Protocols, Securing Wireless Network, Infrastructure Device & Configuration, Troubleshooting Wireless Networks, MAC Filtering နှင့် Bandwidth Control ပြုလုပ်ပုံများ အစရှိသော ဘာသာရပ် များကို နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်ရ ဆရာများ ကိုယ်တိုင် သင်ကြား ပြသပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အသုံးပြုမယ့် သင်ထောက်ကူ ပစ္စည်းတွေကတော့ Wireless Router (Cisco,TP-Link,Dlink,Aztech,Level-one..,etc), Wireless Access Point, Outdoor CPE, 24dBi Grid Parabolic Outdoor Antenna, 15dBi Omni-Directional Antenna, Air Max Sector Antenna, IP Camera, Load Balancing Router, POE Switch, Power Line Adapter, Poe Injector & Splitter, Wireless Print Server တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ABE Endorsed, UK Professional Diploma သင်တန်းတွေကို ဘာကြောင့် တက်သင့်တာလဲ ?
အချိန်တိုအတွင်း UK နိုင်ငံမှ ပေးအပ်သော ABE Endorsed Diploma ကိုရရှိနိုင်ခြင်း၊ ခေတ်နဲ့အညီ လိုက်ပါပြောင်းလဲ လုပ်ဆောင်ရမည့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ၊ နည်းစနစ်များ သိရှိနိုင်ခြင်း၊ ဝန်ထမ်းရေးရာ ကိစ္စရပ်များ၊ ဈေးကွက် ရှာဖွေခြင်းများ နှင့် လုပ်ငန်းအတွက် လိုအပ်သော စာရင်းဇယားများကို စနစ်တကျ လေ့လာလို သူများအတွက် အမှန်တကယ် အသုံးတည့်ခြင်း၊ ABE Endorsed, UK Diploma များသည် Multiple Choice, True or False, Presentation များသာပြုလုပ်ရမည် ဖြစ်သောကြောင့် Exam အတွက် စိုးရိမ်စိတ် မရှိစေဘဲ ပညာရေးဘက်ကော အလုပ်ခွင်ဘက်ကိုပါ လစ်ဟင်းမှု မရှိစေခြင်း။
ကိုယ်ပိုင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်နေသူများ၊ စီးပွားရေးနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု ပညာရပ်ကို စနစ်တကျ သင်ယူလိုသူများ၊ စီမံခန့်ခွဲမှု အပိုင်းသို့ဝင်ရောက် လုပ်ကိုင်လိုသူများ၊ MBA Program မတက်ရောက်ခင် အခြေခံ Foundation အနေဖြင့် တက်ရောက် ထားလိုသူများ၊ UK အသိအမှတ်ပြု ဒီပလိုမာရယူပြီး မိမိတို့လက်ရှိ ရာထူးမှ တဆင့် မြင့်တက်လိုသူများ နှင့် Day၊ အဝေးသင် တက္ကသိုလ် တက်ရောက်နေကြသော ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများ၊ စီးပွားရေးနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု အပိုင်းကို စိတ်ပါဝင်စားသူများ တက်ရောက် နိုင်ပါသည်။
ABE Endorsed, UK Professional Diploma သင်တန်းတွေကို ဘာကြောင့် တက်သင့်တာလဲ?
အချိန်တိုအတွင်း UK နိုင်ငံမှ ပေးအပ်သော ABE Endorsed Diploma ကို ရရှိနိုင်ခြင်း ပြောင်းလဲ တိုးတက် လာသော ခေတ်နဲ့အညီ လိုက်ပါပြောင်းလဲ လုပ်ဆောင်ရမည့် Marketing ဆိုင်ရာ မဟာဗျူဟာ နည်းလမ်းများ၊ Marketing နှင့်ပတ်သက်ပြီး လက်တွေ့ လုပ်ငန်းခွင်တွင် လုပ်သက်အတွေ့ အကြုံများရှိသော်လည်း Theory ပိုင်းကို လေ့လာလို သူများအတွက် အမှန်တကယ် အသုံးတည့်ခြင်း၊ ABE Endorsed, UK Diploma များသည် Multiple Choice, True or False, Presentation များသာ ပြုလုပ်ရမည် ဖြစ်သောကြောင့် Exam အတွက် စိုးရိမ်စိတ် မရှိစေဘဲ ပညာရေးဘက်ကော အလုပ်ခွင်ဘက်ကိုပါ လစ်ဟင်းမှုမရှိစေခြင်း၊
ကိုယ်ပိုင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင် နေသူများ၊ Companies များ၏ Marketing Department ရှိဝန်ထမ်းများ၊ Marketing ပညာရပ်ကို စနစ်တကျ သင်ယူလိုသူများ၊ ဘွဲ့တစ်ခုခုရထားပြီး Marketing Filed ထဲသို့ ဝင်ရောက်လိုသူများ၊ MBA program မတက်ရောက်ခင် အခြေခံ Foundation အနေဖြင့် တက်ရောက် ထားလိုသူများ၊ UK အသိအမှတ်ပြု ဒီပလိုမာရယူပြီး မိမိတို့ လက်ရှိ ရာထူးမှ တဆင့်မြင့် တက်လိုသူများ နှင့် Day၊ အဝေးသင် တက္ကသိုလ် တက်ရောက်နေကြသော ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများ၊ စီးပွားရေးနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု အပိုင်းကို စိတ်ပါဝင်စားသူများ တက်ရောက် နိုင်ပါသည်။
အချိန်တိုအတွင်း UK နိုင်ငံမှ ပေးအပ်သော ABE Endorsed Diploma ကိုရရှိနိုင်ခြင်း၊ ခေတ်နဲ့အညီ လိုက်ပါပြောင်းလဲ လုပ်ဆောင်ရမည့် HR Rules and Regulations များ၊ နည်းစနစ်များ သိရှိနိုင်ခြင်း၊ ဝန်ထမ်းရေးရာနှင့် ပတ်သက်ပြီး လက်တွေ့ လုပ်ငန်းခွင်တွင် လုပ်သက်အတွေ့ အကြုံများရှိသော်လည်း Theory ပိုင်းကို လေ့လာလိုသူများ အတွက် အမှန်တကယ် အသုံးတည့်ခြင်း၊ ABE Endorsed, UK Diploma များသည် Multiple Choice, True or False, Presentation များသာပြုလုပ်ရမည် ဖြစ်သောကြောင့် Exam အတွက် စိုးရိမ်စိတ် မရှိစေဘဲ ပညာရေးဘက်ကော အလုပ်ခွင်ဘက်ကိုပါ လစ်ဟင်းမှုမရှိစေခြင်း၊
UK အသိအမှတ်ပြု ဒီပလိုမာရယူပြီး မိမိတို့လက်ရှိ ရာထူးမှ တဆင့် မြင့်တက် လှမ်းလိုသူများ၊ ပိုမို တိုးတက်လိုသော SME ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်းရှင်များ၊ Companies များ၏ Human Resources Department ရှိဝန်ထမ်းများ၊ HR ပညာရပ်ကို စနစ်တကျ သင်ယူ တတ်မြောက်လိုသူများ၊ ဘွဲ့တစ်ခုခု ရရှိထားပြီး HR Filed ထဲသို့ ဝင်ရောက်လိုသူများ၊ MBA Program မတက်ရောက်ခင် အခြေခံ Foundation အနေဖြင့် တက်ရောက် ထားလိုသူများ နှင့် Day၊ အဝေးသင် တက္ကသိုလ် တက်ရောက် နေကြသော ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသား များ အပါအ၀င် HR ပညာရပ်ကို စိတ်ပါဝင်စားသူ မည်သူမဆို တက်ရောက် နိုင်ပါသည်။
သင်ကြားမည့် အဓိက ဘာသာရပ်များ
️Recruitment and Selection
️Discipline and Grievance
18.Diploma in Business Management (NCFE)
ခေတ်နဲ့အညီ လိုက်ပါပြောင်းလဲ လုပ်ဆောင်ရမည့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ၊ နည်းစနစ်များ နှင့်
လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဆိုင်ရာ ဝန်ထမ်းရေးရာကိစ္စ ရပ်များ၊ ဈေးကွက်ရှာဖွေခြင်းများ နှင့် လုပ်ငန်းအတွက် လိုအပ်သော စာရင်းဇယားများကို လုပ်ငန်းခွင်အတွေ့ အကြုံရှိသော Master/Ph.Dဘွဲ့ ရရှိထားသော ဆရာ၊ ဆရာမများထံမှ စနစ်တကျ သင်ယူလေ့လာရမည် ဖြစ်ပါသည်။
NCFE (UK) Diploma သင်တန်းကို ဘာကြောင့် တက်ရောက်သင့်တာလဲ?
NCFE သည် အင်္ဂလန်နိုင်ငံအခြေစိုက် နှစ်ပေါင်း (၁၇၀) ကျော်သက်တမ်းရှိခြင်း။ အင်္ဂလန်နိုင်ငံရှိ Ofqual ပညာရေးအဖွဲ့အစည်းကြီး၏ အသိအမှတ်ပြုခံထားရခြင်း။ Certificate, Diploma မှသည် Level7ဘွဲ့လွန်အထိတက်ရောက် ရယူနိုင်သော ကမ္ဘာ့အသိအမှတ်ပြုစစ်မှန်ခိုင်မာ၍ အရည်အသွေးပြည့်ဝ သော ပညာရေးအဖွဲ့အစည်းကြီးဖြစ်ခြင်း။ UK အစိုးရ အသိအမှတ်ပြုသည့်အပြင် နိုင်ငံတကာမှ လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် တက္ကသိုလ်များ၏ တန်ဖိုးထားအသိအမှတ်ပြုထားခြင်း။ အတွေ့အကြုံရှိသော Subject Expert ပညာရှင်များ မှ ရေးဆွဲချမှတ် ထားသော သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများ ဖြစ်ခြင်း။ ယခု Professional Diploma အတန်းကို ပြီးဆုံးအောင် တက်ရောက်တဲ့သူတွေကတော့5Stars Hotel မှာ ကျင်းပပြုလုပ်ပေးမယ့် ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ ဘွဲ့နှင်းသဘင်ကိုလည်း တက်ရောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အင်္ဂလန်နိုင်ငံ NCFE (UK) ကတိုက်ရိုက် ပို့ပေးတဲ့ Diploma လက်မှတ်အပြင် Y-Max Collegeမှ ပေးအပ်တဲ့ သင်တန်းပြီးဆုံးကြောင်း လက်မှတ်ကိုပါ ပူးတွဲရရှိအုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်လိုသူများ၊စီးပွားရေးနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှု ပညာရပ်ကို စနစ်တကျ သင်ယူလိုသူများ၊ စီမံခန့်ခွဲမှုအပိုင်းသို့ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်လိုသူများ၊ MBA Program မတက်ရောက်ခင် အခြေခံ Foundation အနေဖြင့် တက်ရောက်ထားလိုသူများ၊UK အသိအမှတ်ပြု ဒီပလိုမာရယူပြီး မိမိတို့လက်ရှိ ရာထူးမှ တဆင့်မြင့်တက်လိုသူများ နှင့် Day ၊ အဝေးသင်တက္ကသိုလ်တက်ရောက်နေကြသော ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ၊ စီးပွားရေးနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု အပိုင်းကိုစိတ်ပါဝင်စားသူများ တက်ရောက်နိုင်ပါသည်။ အဓိက ကတော့ UK က Professional Diploma တွေကို ပြည်တွင်းမှာပဲ ဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ UK Standard အတိုင်း သင်ကြားပေးပြီး UK ကဘွဲ့ကို အချိန်တိုအတွင်းရယူလိုတဲ့ သူတွေ တက်ရောက်သင့်ပါတယ်။
️Characteristics Features of Organization
️Introduction to Business Communication
️Essentials in Human Resources Management
️Management and Organizational Behavior
️Essentials in Marketing Management
️Fundamentals of Service Marketing
️Introduction to Research Market
️️Essentials of Financial Management
️️Environmental Factors influencing on Business
19.Diploma in Developing Business English (NCFE)
English စကားပြော ကျွမ်းကျင်စေရန် နှင့် လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း အင်္ဂလိပ်စာကို လက်တွေ့အသုံးချနိုင်စေရန် အတွက် Interview, Phone calls, Meeting, Presentation စသည့် Speaking Skill နှင့် Communication Skill တို့ကို လေ့ကျင့် သင်ကြားပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင် ရုံးစာများ၊ Email ရေးသားနည်းများ ၊ Reading Passage များကို လေ့ကျင့်ဖတ်ရှုခြင်း၊ Communication Skill များပိုမိုတိုးတက် လာစေရန် Business Listening Skill များကိုလည်း လေ့ကျင့်သင်ကြား ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ငံတကာရှိ Company ကြီးများတွင် လစာကောင်းကောင်း ဖြင့်လုပ်ကိုင်လိုသူများ၊လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း English Skills ပိုမိုကောင်းမွန်လိုသူများ၊အင်္ဂလိပ်စာကို Professional ကျကျ ရေးသားတတ်လိုသူများ၊အင်္ဂလိပ်စာနှင့်ပတ်သက်၍ မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုရှိလိုသူများ၊UK အသိအမှတ်ပြု ဒီပလိုမာရယူပြီး မိမိတို့လက်ရှိ ရာထူးမှ တဆင့်မြင့်တက်လိုသူများ တက်ရောက်သင့်ပါတယ်။
Reading passages about Management
Reading passages of Labour Relations
️Reading passages of Production and Recruitment
️Industrial relations, Company Structure, Job interviews
️Applying the Credit Card
️Invitation to Dinner
️️Dialogue at Work
️️Listening Comprehension videos
20.Diploma in HR Management (NCFE)
လုပ်ငန်းတိုင်းအတွက် မရှိမဖြစ်အရေးပါသော HR စီမံခန့်ခွဲမှုများ ၊ ဝန်ထမ်းသစ်များ ရွေးချယ် ခန့်အပ် ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များ၊ ဝန်ထမ်းများ လုပ်ငန်း ခွင်တွင် တက်တက်ကြွကြွပါဝင်လုပ်ဆောင်နိုင်စေရန် Motivation Process များ၊ ဝန်ထမ်းများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို အကဲဖြတ်စစ်ဆေးခြင်းများ၊ စွမ်းဆောင်ရည်ပေါ်မှုတည်၍ အကျိုးခံစားခွင့်များ၊ ခေတ်နဲ့အညီ လိုက်ပါပြောင်းလဲ လုပ်ဆောင်ရမည့် HR Rules and Regulations များ၊ HR Planning များကို စာတွေ့၊ လက်တွေ့ ပေါင်းစပ်၍ လုပ်ငန်းခွင်အတွေ့ အကြုံရှိသော Master/Ph.D ဘွဲ့ရ ဆရာ၊ ဆရာမများ ထံမှ လေ့လာသင်ယူရပါမည်။
ပိုမိုတိုးတက်လိုသော SME ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းရှင်များ၊ Companies များ၏ Human Resources Department ရှိဝန်ထမ်းများ၊HR ပညာရပ်ကို စနစ်တကျသင်ယူတတ်မြောက်လိုသူများ၊
UK အသိအမှတ်ပြု ဒီပလိုမာရယူပြီး မိမိတို့လက်ရှိ ရာထူးမှ တဆင့်မြင့်တက်လှမ်းလိုသူများ၊
ဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိထားပြီး HR Filed ထဲသို့ဝင်ရောက်လိုသူများ၊MBA Program မတက်ရောက်ခင် အခြေခံ Foundation အနေဖြင့် တက်ရောက်ထားလိုသူများ နှင့် Day၊ အဝေးသင်တက္ကသိုလ်တက်ရောက်နေကြသော ကျောင်းသူ၊ကျောင်းသား များအပါအဝင် HR ပညာရပ်ကိုစိတ်ပါဝင်စားသူ မည်သူမဆို တက်ရောက်နိုင်ပါသည်။
Introduction to HR and HRM
The Role and Structure of the HRM Function
️Model of HRM
️HR Policies and Procedures
️Job Analysis and Job Design
️Process of Interview
️Compensation and Benefit
️️Training and Development
️️Employee Performance Appraisal
21.Diploma in Information and Communication Technology (NCFE)
၂၁ ရာစုတွင် ICT သည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတိုင်းတွင် မရှိမဖြစ် အရေးပါလာတာနှင့်အညီ IT ကိုကျွမ်းကျင်သော လူငယ်များစွာလည်း လိုအပ်လျက်ရှိလာပါသည်။IT ပိုင်းကိုစတင်လေ့လာမည့်သူများအတွက် အဓိကထား၍ ရေးဆွဲထားပြီး IT နှင့်ပတ်သက်သော ဘာသာရပ်မျိုးစုံကို တစ်နေရာတည်းမှာပဲ အခြေခံကနေစတင်သင်ကြားရပါမည်။ Computer တစ်လုံးရဲ့အလုပ် လုပ်ပုံတွေနဲ့ အတွင်းပိုင်းမှာ တပ်ဆင်ထားတဲ့ Hardware အစိတ်အပိုင်းများ အကြောင်း၊ Windows တင်နည်းများနှင့် ပြုပြင်တပ်ဆင်နည်းများကို အသေးစိတ်သင်ကြားရပါမည်။ ထို့အပြင် Computer Networking ပိုင်းများ၊ Internet နှင့် Web Design နည်းပညာများ၊ Programming အခြေခံများ ကိုပါ ထည့်သွင်း သင်ကြားပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတွေတင်မကသေးပါဘူး။ လုပ်ငန်းခွင်အတွက် အလွန်အရေးပါတဲ့ Communication Skills၊ Presentation Skills တွေအပြင် အလုပ်ကောင်းတစ်ခုရဖို့အတွက် လျှောက်ထားပုံ နည်းစနစ်များ၊ Interview အတွက် ပြင်ဆင်နည်းများ နှင့် Professional CV တစ်စောင် ရေးသားနည်းတွေကိုပါ ထည့်သွင်း သင်ကြားပေးသွားမှာ ဖြစ်လို့ IT ပိုင်းကို Professional အနေနဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုလိုသူများတက်ရောက်နိုင်ပါသည်။
IT Professional အဖြစ်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပြုလိုသူများ၊IT နှင့်ပတ်သက်၍ အခြေခံဘာသာရပ်များ ကိုသိလိုသူများ၊လက်ရှိတွင် IT ပိုင်းဖြင့်အလုပ် လုပ်နေသူများ၊ နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု UK မှပေးအပ်သော ICT Diploma ရယူလိုသူများ၊မိမိ Career ကိုမြှင့်တင်လိုပြီး လစာပိုမိုကောင်းမွန် လိုသူများ တက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။
Introduction to PC Hardware & System
️Operating Systems and Installation
️Hardware Maintenance & Troubleshooting
️Computer Networking Fundamentals
️Internet & Web Design Technology
️Introduction to Computer Programming
️Communication and Presentation Skills
️Job Hunting Skills
22.Diploma in Marketing Management (NCFE)
ခေတ်နဲ့အညီ လိုက်ပါပြောင်းလဲ လုပ်ဆောင်ရမည့် Marketing ဆိုင်ရာ မဟာဗျူဟာနည်းလမ်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းအတွက်အရေးကြီးသော Marketing Plan ရေးဆွဲနည်းများ၊ Market Research ပြုလုပ်နည်းများ၊ ဈေးနှုန်းသတ်မှတ်ခြင်းဆိုင်ရာ နည်းဗျူဟာများ၊ Customer Segment သတ်မှတ်ခြင်း၊ Target Customer များရွေးချယ်ခြင်း၊ မိမိ Brand ကို ဈေးကွက်ဝင်အောင် ထိုးဖောက်ခြင်း အစရှိသော သင်ခန်းစာများကို လုပ်ငန်းခွင်အတွေ့ အကြုံရှိပြီး Master/Ph.D ဘွဲ့ရရှိသော ဆရာ၊ ဆရာမများထံမှ လေ့လာသင်ယူရပါမည်။
ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်လိုသူများ၊Companies များ၏ Marketing Department ရှိဝန်ထမ်းများ၊Marketing ပညာရပ်ကို စနစ်တကျသင်ယူလိုသူများ၊ဘွဲ့တစ်ခုခုရထားပြီး Marketing Filed ထဲသို့ ဝင်ရောက်လိုသူများ၊MBA program မတက်ရောက်ခင် အခြေခံ Foundation အနေဖြင့် တက်ရောက်ထားလိုသူများ၊UK အသိအမှတ်ပြု ဒီပလိုမာရယူပြီး မိမိတို့လက်ရှိ ရာထူးမှ တဆင့်မြင့်တက်လိုသူများ နှင့် Day၊ အဝေးသင်တက္ကသိုလ်တက်ရောက်နေကြသော ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများ၊ စီးပွားရေးနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု အပိုင်းကိုစိတ်ပါဝင်စားသူများ တက်ရောက်နိုင်ပါသည်။
️Model of Consumer and Buyer Behavior
️Segmentation, Targeting, Positioning
️Products, Branding and Packaging
️Strategies of Pricing
️Logistics and Distribution
️Communication and Promotions
️Service and Your Business
23. Diploma in Networking Engineering (NCFE)
24.Diploma in Software Engineering (NCFE)
Software တစ်ခုရေးသားဖန်တီးလျှင် မသိမဖြစ် Programming Language များ၊ Program တစ်ခုရေးဆွဲရာတွင် လိုအပ်သော Algorithm နှင့် Data များ မည်သို့သိမ်းဆည်းတည်ဆောက်ရမည်ကို သိရှိစေရန်အတွက် Data Structure and Algorithm ဘာသာရပ်တို့ကို သင်ကြားရပါမည်။ Software တစ်ခုရေးသားရာတွင်အဓိကလိုအပ်သော Object Oriented Programming Concept (OOP) များကိုအခြေခံမှစတင်ကာ အဆင့်ဆင့် စဉ်းစားတွေးခေါ် ပုံများကိုသင်ကြားပေးမည် ဖြစ်ပြီး Open Source ဖြစ်သော Java Programming Language ဘာသာရပ်ကို အသေးစိတ် သင်ယူလေ့လာရပါမည်။Software Engineer ကောင်းတစ်ယောက် အဖြစ်ရပ်တည် အသက်မွေးဝမ်း ကြောင်းပြုနိုင်စေရန် Software ရေဆွဲရာတွင် အရေးကြီးသော လိုအပ်ချက် များ၊ တည်ဆောက်ပုံအဆင့်ဆင့် နှင့် ၎င်း Software နဲ့ လိုက်ဖက်သော Design Model ရွေးချယ်မှုများကို သတ်မှတ်ထားသော အချိန်၊ ငွေကြေးများဖြင့် ကိုက်ညီသည့် Software Product တစ်ခုထွက်ပေါ် လာစေရန်ရည်ရွယ် သင်ကြားပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။Software တွင်အသုံးပြုရမည့် Data အချက် အလက်များကိုလည်း နည်းလမ်းမှန်ကန်စွာ စနစ်တကျ ကိုင်တွယ်ထိမ်းချုပ်တတ်စေရန် Database Management System (MySQL)ဘာသာရပ် အကြောင်းကိုလည်း သင်ကြားရပါမည်။
Software Engineer, Programmer နှင့် Software Developer အဖြစ်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပြုလိုသူများ၊ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(CU) ၊ နည်းပညာတက္ကသိုလ် (TU)မှ ကျောင်းသား ၊ ကျောင်းသူများ၊ Programming ပိုင်းဖြင့်အလုပ် လုပ်နေသူများ၊ နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု UK မှပေးအပ်သော Software Engineering Diploma ရယူလိုသူများ၊ မိမိ Career ကိုမြှင့်တင်လိုပြီး လစာပိုမိုကောင်းမွန် လိုသူများ တက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။
️Introduction to Project Management
️Data Structure and Operations
️Algorithm and Properties
️Database Management with MySQL
️Object-Oriented Programming Concept
️Getting started with Java Programming Language
️Structure of the Java Language
️Files Input / Output
️Working with Relational Database
25.Diploma in Web Development (NCFE)
Web Developer, Designer အဖြစ်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပြုလိုသူများ၊ Dynamic Website တစ်ခုကို မိမိကိုယ်တိုင် ဖန်တီးပုံဖော် ရေးသားလိုသူများ၊ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(CU) ၊ နည်းပညာတက္ကသိုလ် (TU)မှ ကျောင်းသား ၊ ကျောင်းသူများ၊ Website ရေးသားခြင်းအပိုင်းဖြင့်အလုပ် လုပ်နေသူများ၊ နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု UK မှပေးအပ်သော Web Development Diploma ရယူလိုသူများ၊ မိမိ Career ကိုမြှင့်တင်လိုပြီး လစာပိုမိုကောင်းမွန် လိုသူများ တက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။
️Features of HTML5
️HTML with CSS
️Use of Web Development Tools
️Learning with PHP
️Cookies and Session
️Files and Directories
️Developing an application using PHP and MySQL
️Content Management System